RAVELOSON CONSTANT : « Tohizo ny tolona hoy prezidà « – MyDago.com aime Madagascar
Nanazava tamin’ny vahoaka teny amin’ny Magro Behoririka ny momba ny nanolorana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana ho kandidà ny Ct Raveloson Constant. Tamin’ny alalan’ny ohatra no nentina nanazavana ny fanapahankevitra noraisin’ny filoha Ravalomanana Marc. Raha hiainga isika hoy izy ho any Ambohijatovo , Ambohimanarina ka Ambohibao no tanjona. Rehefa miteny isika hoy ity mpanao politika ity hoe mody ny filoha Ravalomanana Marc. Tsy hody fahatany eo izy tsy izay no tanjona, fa izy matoa tadiavintsika hiverina eto dia ny fiverenan’ny firenentsika amin’ny laoniny. Izay ahatongavantsika eny Ambohibao no tanjona Raha misy jiolahy mpanendaka mamomo miandry anao atsy dia aza gaga ianao raha aty Ankorondrano ny làlana. Ataovy ao an-tsaina hoy Constant fa any Ankorondrano misy làlana mankany Ambohibao.Moramora hoy izy ny toerany satria ny fipetrany dia ny hoe ialahy ve sarotiny alohan’ny tompony. Izay no nandraisanay azy. Teo vao tonga ny eritreritra hoe tonga any Ambohibao ihany izany. Tsy miteniteny foana ingahy Goldblatt. Efa niteny ve hoy Constant ny filoha Ravalomanana fa tsy hody mihitsy. Efa niteny ve hoe ajanony ny tolona. Tohizo ny tolona hoy prezidà na hihodina any Laniera. Hanao fifidianana isika hoy izy ka raikitra tsar any fifidianana dia isika efa manana ny vonona, ary mibolisitra ny fifidianana vao maika isika ihany koa efa manana ny vonona. Jereo ny lisim-pifidianana io hoy Constant ary aza mety adalaina hoe ny anaranao dia ao.
Auteur Solo Razafy*Publié le 17 avril 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : « Tohizo ny tolona hoy prezidà « ”
Mazava, ary ilay tolona tohizana izao dia 1) miomana tsara @ izay hataon’ny FAT na handà na hanaiky ny filatsahan’ny lalao Ravalomanana. Raha sanatria mandà ny CES fa ireo mantsy miaraka @ FAT dia tonga dia manomana hetsika lehibe. 2) Manaramaso tsara ny fanomanana ny fifidianana, ohatra mijery ny logiciel-ny CENIT na ny fanaovana printy ny bilete tokana na koa fanomanana ireo biraom-pifidianana.
Tokony mba ho vita izany, satria isika efa tsy sahy nivoaka ny Magro ihany ary ireo mpitarika koa efa tsy afaka milatsaka intsony…Ny zanak’i Dada sisa no fanatenana farany ahafahanamaerina an’i Dada ka aoka tsy ho be siasia sy be resaka isika fa mbola betsaka ny zavatra tokony atao, ary ny tolona mbola tsy vita.
resak’é… sisa no ataon’ireto marina!!! hi!hi!hi!
Mila mandeha mijery ny lisitra « provisoire » isika rehetra, manamarina ny anarantsika sy ny nomeraon’ny karapanondro, fa indrindra koa mampiditra anarana raha sendra tsy ao. Tena misy ny latsaka, indraindray maromaro mihitsy, arakaraky ny fokontany io ka aleo hamarinina satria tsy hisy hanantona anao hilaza hoe tsy ao anie ny anaranao!
Asa manaraka ny fanazavana amin’ny mpiray donak’afo,mpiaramonina, mpiray tanana ny pitsopitson’ny biletà tokana. Aoka tsy hiandrasana tompon’andraikitra fa ifarimbonan’ny herivelon’ny fiarahamonina, tahaka ny fomba tena malagasy mahazatra.
Précédent Article précédent : Annonce du GTT International – Genève au peuple Malagasy: "Mme Lalao Ravalomanana peut se porter candidate pour les présidentielles"
Suivant Article suivant : RAVELONANOSY MAMY TIANA : ARAHO NY TOROMARIKA POLITIKA HITARIHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ANTSIKA